भावी आईजीपीद्वयको नाम टुंगो लाग्यो, यस्तो छ नालीबेली ! « Naya Bato
भावी आईजीपीद्वयको नाम टुंगो लाग्यो, यस्तो छ नालीबेली !
काठमाडौं – नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनको समय नजिकिँदै जाँदा सम्भावित आइजीपीका बारेमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । नेपाल प्रहरीका आईजीपी प्रकाश अर्याल र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठ यही चैत २८ मा नेतृत्वबाट विदा हुँदैछन् ।
आईजीपी अर्याल उनी विशेष परिस्थितिमा महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा आएका थिए भने श्रेष्ठ सहजै आईजीपी बनेका थिए । अर्याल र श्रेष्ठको अवकाशपछि देशभरी संगठन सञ्जाल भएको पुरानो संगठनको नेतृत्वमा को आउला भनि चासो र चर्चा हुनु अस्वाभाविक पनि मानिँदैन ।
तर नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनको समयमा विगतमा हुनेगरेका राजनीतिक दाउपेचले भने यो संगठनले व्यावसायिक कौशल भएका अधिकृतहरुलाई पाखा पार्दै आएको अनुभव सुनाउँछन् उच्च तहकै प्रहरी अधिकारीहरु ।
तर, स्रोतका अनुसार सरकारले दुवै सुरक्षा संगठनका भावी आईजीपीको नाम टुंगो लगाएको छ । नेपाल प्रहरीमा रमेश खरेल र सशस्त्र प्रहरीमा पुष्पराम केसीको नाम टुंगो लगाएको हो ।
आगामी हप्ता बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले खरेल र केसीको नाम सिफारिस गर्ने सरकारको तयारी रहेको उच्च स्रोत बताउँछ ।
बरियाताका अनुसार नेपाल प्रहरीका रमेश खरेल दोस्रो नम्बरमा थिए भने पहिलो नम्बरमा डिआईजी सर्वेन्द्र खनाल रहेका थिए । त्यस्तै तेस्रोमा डिआईजी पुष्कर काकी थिए ।